SingForYou.net - Ngwe Zin Yaw
Tags : ကျွန်တော့်ရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရ
By : myobala on Dec 16, 2009
Score: 178 Rating: 4.56 Comments: 37
Ngwe Zin Yaw's Description
cookey on Nov 1, 2010 0
bro sing tarayan kaung tal bro birthday ko di ta khr so yin taw Happy Birthday lo pyaw lo ya pi :))
sunglove3 on Oct 30, 2010 0
Happy belated Birthday bro...a tan lal lay chit saya thi chin lal kg tal..a may arr pay nay bar tal naw...:)
thinkyaing on Sep 29, 2010 0
This song also good*****
4eva5exy on Sep 26, 2010 0
bro yay...min thar lote par lar....khite thwar p...voice ko par... :D
marmar on Aug 14, 2010 0
အ၇မ်းကောင်းတယ်...အဲဒီသီးချင်းလေးကိုလည် အ၇မ်းကြိုက်တယ်.မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေးပြီးလို၇ာဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်ဝပါစေနော်....အားပေးသွားတယ်...း) **********'********
naung252 on Jan 14, 2010 0
chitmoe2009 on Jan 12, 2010 0
happy birthday.....nice song.
koaungkhaing on Jan 11, 2010 0
Oh Happy Birthday brother.... nice singing..
ahphyuyaung on Dec 23, 2009 0
happy belated birthday... so nice to listen!! 5***
yan_naing on Dec 19, 2009 0
hippo on Dec 17, 2009 0
hi bro ရေ sorry for my late birthday wishes. Hope you hadagreat day. That song's really good. Clap Clap Clap.
ရပါတယ် ညီမလေးရယ် အကိုနားလည်ပါတယ်.....အခုလိုနားထောင်ပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လှပါပြီ....ညီမလေးလည်းအရာရာအဆင်ပြေ ပါစေကွယ်...
forevermoe on Dec 16, 2009 0
ko g myoooooooooo..sorrii par nyi ma lay ma thi lite buu ko g BD ko ho nay ka may tone ka tot ma pyaw pae nae ...:( khu tot comment pay tar late twer p ..:( Happy Birthday par ko gg myoo....d mway nay mha sa pyi noung nit poung myar swarr ko g bawa lay asasa ayar yar chaw mwae pyi pyaw shwin chan myae swar phat tan ng par say lo ..nyi ma lay suu tg pay lite par tal nor ko gg myoo..BD mhar so twer tae song lay ka laeayan ko kg par tal shinn..***************************twe lae pay kae lite par p ..:P nyi ma lay moe moe ..:D
raindrops on Dec 16, 2009 0
^ v ^ ... Happy Birthday ... to You ! ... Happy Birthday ... to You ! ... Happy Birthday ... Dear Phay Gyi ! ... Happy Birthday ... to You ! ... How Old are You ? ... How Old are You now ? ... ( ... 83 lar hinn ? ... ) heheh ... aww diathet kyi kya mhar ... mg ... mal ... sone nyi ... mont. ka lay phae kar kway chin thi tae ... lote ma nay tot Phay Gyi ... may Be Lu Ma Gyi ka ... nu nu ... yin yin ... kabyar ... ma san chin woo tae ... Phay Gyi BD Night mhar ... Be Lu ma toe thitsar ... akyinnar ... tway nae Cake hla hla ... lote pee ... Phay Gyi ko ... Candle 83 khu ... mee mote pee ... mee toe ... Family ... pyaw pyaw gyi ... sar kya mal tae ... sate pu par nae ... nout nay. kya hmar ... Phay Gyi ko sar ... mee nae ... mee yae someone special ... sin yaw lay tway si twar lite mal naw ... heheh ... ~*~ Ko Gyi Bala ... ***** May All Your Dreams Come True ! ***** ... I wish for you ! ... ***** May You Be Free from Five Enemies ! ***** ... your nyi ma lay,Rain ! ... ^ v ^
ညီမလေးရေ....အရာရာအဆင်ပြေလို့ လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝ ပါစေကွယ်......
Ilovemusic on Dec 16, 2009 0
happy birthday to you bro myobala......BDamhat ta ya song lay ka lal..ta gal...good tae song lay bar....so twar ter lal...so nice to listen bar byooo.....bravooo...5*4u bar byar.
shwezin888 on Dec 16, 2009 0
man ka lar bar pyin bar shin , Happy Birthday naw chit ko gyi ^_^dbay so tha ta chit lay ka ta kelamat ta ya bar bal ********* so nice !!!
whitekisslay on Dec 16, 2009 0
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ရက် နေ့မှာကျရောက်သော ကိုကို မျိုးဗလရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ဘဝမှာအစစ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ သီချင်းတွေအများကြီး ဆက်လက်သီဆိုနိုင်ပါစေလို့ ညီမလေး စမ်းမြ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ အခုဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးကလဲ တကယ်အမှတ်တရနဲ့ နားထောင်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ် ။ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးနဲ့အတူ ကြယ်လေး၅လုံးပါ ပေးလိုက်ပြီနော် *****:)
လိမ္မာလိုက်တဲ့ညီမလေး.....အကို့အမေက မမွေးခဲ့ပေမယ့် အကိုကတော့ ညီမလေးတွေဆို ကိုယ့်ညီမလေးအရင်းလို အရမ်းချစ်တတ်တယ်......ညီမလေးသော်တာလေးလည်းတယောက်အပါအ၀င်ပေါ့ကွယ်....ညီမလေးလည်း အရာရာအဆင်ပြေပါစေကွယ်....
pp01 on Dec 16, 2009 0
Ahoot..good..mingalarpar shinn..tal hoot lot bae, Bala gyi kyan mar say..chan thar par say..myo myo myet myet lay myan myan sar ya par say..Arr lone asin pyay par say..A VERY HAPPY BIRTHDAY my friend::D
ဟဟဟ...ပီပီရေ...နင်ကလည်းဟာ....ငါ က မြိုးမြိုးမြက်မြက်လည်းမစားချင်တော့ပါဘူးဟ...နားအေးပါးအေးပဲနေချင်တာ.....ဆုတောင်းလေးကတော့မိုက်တယ်ဟ....ပြည့်ပါရစေလို့....နင်တို့မိသားစုလည်းအရာရာအဆင်ပြေပါစေဟာ.....
greenlay on Dec 16, 2009 0
ကိုမျိုးကြီးရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှ သည် ..... နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ..... စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီး .... ဘ၀မှာ ထာဝရ အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေ ..... အခက်အခဲဟူသမျှ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ .... SFU က မောင်နှတွေနဲ့အတူ မစိမ်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ် ၊ သီချင်းလေးကလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။
မမစိမ်းရေ....မမစိမ်းလည်းလိုရာဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေဗျာ.....ချစ်တဲ့ ချစ်ကိုကြီးနဲ့ ရိုးမြေကျအောင်ပေါင်းပြီးသားသမီးတွေနဲ့လည်းတသက်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့....
paradise on Dec 16, 2009 0
Happy Birthday to you...Happy Birthday to you.....Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to ..bRo gYi.....:))...... Birthdayamat ta ya song twe ko so twar tar......a yan ko nar htaung loh kg tal bro gyi yal.....bro GYi ye' birthdayatwat ...a jit lay ka yaw...song lat saung twe bar twe...so pay wooo lar :P......." ya nay ma thee...naung nit paung myar swar taing aung pyaw pyaw shwin shwin kyan kyan mar mar ne'..pyat than naing par say byarrrrrrrrrr ( arr ayay gyi tar ta ku kyan tay tal ) wife chaw chaw lay ya par say byarrrrrrrrrrrrrrrr....********:))
ရွှေမင်းသမီးလေးရေ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်.....အဲ...မိန်းမချောချောလေးတော့မရ ပါရစေနဲ့ကွယ် ......အဲဒီဆုနဲ့တော့လွဲပါရစေ...ဘာလို့ဆို အကိုလုပ်ချင်တာတွေ မလုပ်ရမှာစိုးလို့လေ.....ဟင်း.ဟင်း...
thant on Dec 16, 2009 0
happy birthday par bala yay........may u be happy & healthy always......lovely song wz nice vocal....*********
winwinthant on Dec 16, 2009 0
ယနေ့ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်စွာသီချင်းများကို သီဆိုနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်.......
630 on Dec 16, 2009 0
mingalar par bro gyi yay ..i like you sings n good songs,...so,,...5*****for u.....
turikimuriki on Dec 16, 2009 0
mingalar par bro gyi !ayan2ko listen lo kg par tel. snow twe kya nay tar lar ? ehee ehee di mhar lae ma kya thay buu :(( bro gyi lae su taung pyae par say . 5*4u :P
myobala on Dec 16, 2009 1